आन्तरिक हवाई भाडा ३६ प्रतिशतसम्म छुट हुने ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १० चैत्र सोमबार १२:११
आन्तरिक हवाई भाडा ३६ प्रतिशतसम्म छुट हुने !
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पनि अत्यधिक भाडा लिएको भन्दै गुनासो बढेपछि आन्तरिक वायुसेवाले भाडादरमा छुट दिने घोषणा गरेका छन् । सरकारले तोकेको अधिकतम सिलिङभित्रै भाडा लिँदै आए पनि अनर्गल प्रचार भएपछि भाडा दरमा छुट दिने निर्णय गरेको आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ट्रङ्क रुटमा यस्तो निर्णय गरिएको प्रस्ट पारेको छ । सङ्घका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दरमा २० देखि ३६ प्रतिशतसम्म छुट यात्रुले पाउनेछन् । सङ्घका अनुसार यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयरलाइन्सले तत्कालका लागि ट्रङ्क रुटमा यस्तो छुट उपलब्ध गराउने छन् । यद्यपि यस्तो भाडा दर सिमरा, भरतपुर र जनकपुरमा लागू हुने छैन ।
यात्रुले यस्तो सुविधा सोमबारदेखि चैत २१ गतेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सङ्घले हवाई भाडा दरमा ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनको भए पनि नेपाल आयल निगमले विश्वव्यापी रूपमै हवाई इन्धनको मूल्य घटे पनि त्यस अनुसार नघटाएको आरोप लगाएको छ । निगमले न्यूनतम मुनाफा राखी हवाई इन्धन बिक्री गरे भाडा दर स्वतः घट्ने सङ्घले जनाएको छ । यसअघि भाडा दर अत्यधिक लिएको गुनासो बढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले वायुसेवा सञ्चालकसँग शनिबार छलफल गरी भाडा दर घटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । वायुसेवा सञ्चालकले भाडा दर पुनर्विचार गर्न सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो खबर आजको गोर्खापत्रमा छ।
PREVIOUS Previous post: अमेरिकामा काेराेना भाइरसकाे संक्रमण तीव्र, महामारीकाे अर्काे केन्द्र न्यूयोर्क हुनसक्ने चेतावनी !
NEXT Next post: नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह